Ungachinja sei iyo HEIC fomati yemazhinji mafoto panguva imwechete pasina zvirongwa zvekunze uye zvemahara | IPhone nhau
Maitiro ekuchinja iyo HEIC fomati yemazhinji mafoto panguva imwechete pasina zvirongwa zvekunze uye zvemahara
Iyo iPhone ine maviri mafoto ekutapa mafomati sarudzo sarudzo: "Kubudirira kwepamusoro" uye "Inowirirana zvakanyanya". Mune ino kesi tinogona kusarudza iyo inonyatsotikodzera zvakanyanya asi isu takatoyambira kuti fomati yakatsanangurwa muHEVC / HEIF, HEIC saka mimwe michina haigone kuverenga iyi mhando yemafomati uye isu tinofanirwa kuichinja kuita jpeg kana zvakafanana.
Izvi, izvo zvinogona kuve chinhu chakareruka kuita mune imwe kana maviri mafoto, zvinova zvakaoma kana tichifanira kuzviita mune mazhinji uye ndosaka nhasi tichaona nzira zvachose mahara, pasina wechitatu-bato kunyorera of nenzira uye nekutsanya kwepRoast HEIC mapikicha ejpeg muhuwandu, mazhinji panguva imwe chete.
Maitiro aya anogona kuratidzika kunge akaomarara uye vashandisi vazhinji vanotsvaga mashura ezvidzidzo kana kunyange maficha ekuti shanduko yemafomati ikurumidze, asi isu hatidi chero chinhu kunze kweiyo iPhone ine mafoto uye Mac. iyo Mac ichishandisa AirDrop zvakanyanya zvirinani. Kana tangova nemifananidzo isu tinongofanira kutevera matanho aya:
Isu tinosarudza ese mafoto atinoda kushandura uye kuvhura nawo Ongorora:
Tinovhura navo Ongorora uye isu tinovasarudza vese (kuti vese vakasarudzwa mubhuruu, zvakakosha)
Iye zvino tinofanirwa kubaya "Archive" mubhawa repamusoro uyezve mu «Tumira mifananidzo yakasarudzwa:
Iyi dialog hwindo ichaonekwa uye isu tinofanirwa kubaya mikana:
Takasarudza sarudzo JPEG, JPEG2000, OpenEXR, PDF, PNG, kana TIFF:
Chidzidzo chidiki chandakambobvunzwa uye chandinogovana nemi mose, kunyanya kune avo vaisaziva mukana uyu wekushandura mafoto ese kamwechete kubva kune imwe fomati kuenda kune imwe kubva kuMac kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchinja iyo HEIC fomati yemazhinji mafoto panguva imwechete pasina zvirongwa zvekunze uye zvemahara
Wow! Ndanga ndiri Mac kwemakore uye ndanga ndisingazive hunyengeri uhu. Yangu kondirakiti gore rekutambira harizive maHeic mafaera uye rinoshanda kwandiri.
Zvakanaka, zvakanaka kwazvo. Unoita sei izvozvo kubva paWindows?
Apple Music inovandudza mamwe maalbhamu maficha
Kugadzirwa kweApple zvishandiso zvinobva kuChina kuenda kuTaiwan